သငျ့စရိုကျဟာ အောကျပါအခကျြမြားနဲ့ ကိုကျညီပါသလား...?(၁မိနဈလောကျအခြိနျပေးပွီး ဖတျကွညျ့ပါ) - Khitamyin
ဒီစာဖတျသောမိတျဆှေ၊ သငျ့စရိုကျဟာ အောကျပါအခကျြမြားနဲ့ ကိုကျညီပါသလား…?
” သငျ့မှာ တဈခွားသောလူတှေ ကိုယျ့ကို နှဈသကျမွတျနိုးစခေငျြတဲ့ ဆန်ဒရှိတယျ။ သငျဟာသငျကိုယျတိုငျ နှိုငျးခြိနျဆုံးဖွတျတတျတဲ့ အသိရှိပါတယျ။
သငျ့မှာ ကိုယျကြိုးအတှကျ အသုံးမပွုရသေးတဲ့ စှမျးရညျတှေ ကိနျးအောငျးနတေယျလို့ ခံစားရတယျ ။
သငျ့မှာ ပုဂ်ဂိုလျရေး အားနညျးခကျြတခြို့ ရှိပမေယျ့ ဒီအားနညျးခကျြနဲ့ ညီမြှတဲ့ အစားထိုးစရာ ကောငျးကှကျတှလေညျး ရှိပါသေးတယျ။
အပွငျပနျးမှာ စညျးကမျးနဲ့ မိမိကိုယျကိုထိနျးခြုပျနိုငျစှမျး ရှိသယောငျပဖွေဈနပေမေယျ့ အတှငျးစိတျမှာတောဘ ပူပနျပွီး မလုံခွုံသလို ခံစားရလရှေိ့တတျပါတယျ။
တခြို့သောအခြိနျတှမှော ကိုယျလုပျလိုကျတာ၊ကိုယျဆုံးဖွတျလိုကျတာ မှနျရဲ့လားဆိုတဲ့ သံသယတှေ ဝငျနတေတျပါတယျ။
သငျဟာ ပတျဝနျးကငျြပွောငျးလဲမှုနဲ့ အတှအေ့ကွုံစုံလငျမှု အခြို့ကိုလိုလားတတျပွီး ကနျ့သတျခကျြတှေ၊ တားမွဈခကျြတှေ ရဲ့အောကျမှာ ခြုပျနှောငျမှုတှကေို စိတျတိုငျးမကပြါဘူး။
သငျဟာ ကိုယျတိုငျစဉျးစားတှေးတောရတာကိုပဲ ဂုဏျယူတတျပွီး သူတဈပါးရဲ့အဆိုကို လုံလောကျတဲ့ သကျသမေရှိဘဲ လကျမခံပါဘူး။
သငျဟာ သူတဈပါးအပျေါ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးရှိခွငျးကွောငျ့ မသိတတျသူလို့ အမွငျခံရမှာစိုးရျိမျတတျပါတယျ။
တခြို့အခြိနျတှမှော သငျဟာ ပှငျ့လငျးပြျောရှငျတတျသူ၊ ဖျောရှသေူ၊ လူမှုရေးစိတျရှိသူဖွဈသလို တခြို့အခြိနျတှမှောလညျး ဘာသိဘာသာနတေတျသူ၊ သတိရှိသူ၊ သီးသနျ့နတေတျသူ ဖွဈပါတယျ။
တခြို့သော သငျ့ရညျမှနျးခကျြတှဟော တျောတျောလေး သဘာဝမကဖြွဈနတေတျပါတယျ။
သငျ့ရဲ့အဓိကပနျးတိုငျတှထေဲက တခြို့ကတော့ ဘဝတဈလြှောကျ လုံခွုံမှုရှိစဖေို့ပဲဖွဈပါတယျ။”
ဒီအခကျြတှနေဲ့ကိုကျညီနမေယျဆို ကြေးဇူးပွု၍ like, comment ရေးပွီး shareပေးပါ။ 🙏
တကယျတော့ ဒါဟာ ဘယျလဖှား၊ဘာညာသှေးတှရေဲ့ စရိုကျကဘယျလိုဆိုတာတှထေကျ ပိုပွီးစနဈတကသြုတသေနပွုထားတဲ့ လူ့တိုငျးအတှကျ မှနျနိုငျလုနီးပါးရှိတဲ့ သဘာဝတှပေဲဖွဈပါတယျ။ လုံးဝ Science သီးသနျ့ဖွဈပါတယျ။
ဒါကို Bertram R Forer လို့ချေါတဲ့ စိတျပညာရှငျက ရေးသားခဲ့ပွီး Burnam Effect သို့မဟုတျ Forer Effect လို့ချေါပါတယျ။ သငျ့အတှကျ ၉၀% ထကျတောငျ ပိုမှနျနနေိုငျမှာပါတဲ့။ ဘာ့ကွောငျ့လညျး။ အပျေါကအခကျြတှကေို နောကျတခေါကျပွနျဖတျ တှေးကွညျ့ပွီး ထငျရာပွောခဲ့ကွညျ့လေ။😉
Credit : ATPO
ဒီစာဖတ်သောမိတ်ဆွေ၊ သင့်စရိုက်ဟာ အောက်ပါအချက်များနဲ့ ကိုက်ညီပါသလား…?
” သင့်မှာ တစ်ခြားသောလူတွေ ကိုယ့်ကို နှစ်သက်မြတ်နိုးစေချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိတယ်။ သင်ဟာသင်ကိုယ်တိုင် နှိုင်းချိန်ဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့ အသိရှိပါတယ်။
သင့်မှာ ကိုယ်ကျိုးအတွက် အသုံးမပြုရသေးတဲ့ စွမ်းရည်တွေ ကိန်းအောင်းနေတယ်လို့ ခံစားရတယ် ။
သင့်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အားနည်းချက်တချို့ ရှိပေမယ့် ဒီအားနည်းချက်နဲ့ ညီမျှတဲ့ အစားထိုးစရာ ကောင်းကွက်တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။
အပြင်ပန်းမှာ စည်းကမ်းနဲ့ မိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း ရှိသယောင်ပေဖြစ်နေပေမယ့် အတွင်းစိတ်မှာတောဘ ပူပန်ပြီး မလုံခြုံသလို ခံစားရလေ့ရှိတတ်ပါတယ်။
တချို့သောအချိန်တွေမှာ ကိုယ်လုပ်လိုက်တာ၊ကိုယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ မှန်ရဲ့လားဆိုတဲ့ သံသယတွေ ဝင်နေတတ်ပါတယ်။
သင်ဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ အတွေ့အကြုံစုံလင်မှု အချို့ကိုလိုလားတတ်ပြီး ကန့်သတ်ချက်တွေ၊ တားမြစ်ချက်တွေ ရဲ့အောက်မှာ ချုပ်နှောင်မှုတွေကို စိတ်တိုင်းမကျပါဘူး။
သင်ဟာ ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားတွေးတောရတာကိုပဲ ဂုဏ်ယူတတ်ပြီး သူတစ်ပါးရဲ့အဆိုကို လုံလောက်တဲ့ သက်သေမရှိဘဲ လက်မခံပါဘူး။
သင်ဟာ သူတစ်ပါးအပေါ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိခြင်းကြောင့် မသိတတ်သူလို့ အမြင်ခံရမှာစိုးရ်ိမ်တတ်ပါတယ်။
တချို့အချိန်တွေမှာ သင်ဟာ ပွင့်လင်းပျော်ရွှင်တတ်သူ၊ ဖော်ရွှေသူ၊ လူမှုရေးစိတ်ရှိသူဖြစ်သလို တချို့အချိန်တွေမှာလည်း ဘာသိဘာသာနေတတ်သူ၊ သတိရှိသူ၊ သီးသန့်နေတတ်သူ ဖြစ်ပါတယ်။
တချို့သော သင့်ရည်မှန်းချက်တွေဟာ တော်တော်လေး သဘာဝမကျဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့အဓိကပန်းတိုင်တွေထဲက တချို့ကတော့ ဘဝတစ်လျှောက် လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။”
ဒီအချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီနေမယ်ဆို ကျေးဇူးပြု၍ like, comment ရေးပြီး shareပေးပါ။ 🙏
တကယ်တော့ ဒါဟာ ဘယ်လဖွား၊ဘာညာသွေးတွေရဲ့ စရိုက်ကဘယ်လိုဆိုတာတွေထက် ပိုပြီးစနစ်တကျသုတေသနပြုထားတဲ့ လူ့တိုင်းအတွက် မှန်နိုင်လုနီးပါးရှိတဲ့ သဘာဝတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ လုံးဝ Science သီးသန့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကို Bertram R Forer လို့ခေါ်တဲ့ စိတ်ပညာရှင်က ရေးသားခဲ့ပြီး Burnam Effect သို့မဟုတ် Forer Effect လို့ခေါ်ပါတယ်။ သင့်အတွက် ၉၀% ထက်တောင် ပိုမှန်နေနိုင်မှာပါတဲ့။ ဘာ့ကြောင့်လည်း။ အပေါ်ကအချက်တွေကို နောက်တခေါက်ပြန်ဖတ် တွေးကြည့်ပြီး ထင်ရာပြောခဲ့ကြည့်လေ။😉